सामाजिक Archives - Page 16 of 38 - khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
महिला हराएको सुचना !
Posted On January 19, 2018 Author siteadmin Category सामाजिक.
महिला हराएको सुचना – चीरेमाया महर्जन नाउ हाल खाचो, पङ, किर्तिपुर मा बस्दै आयकी महिला हिजो सान्खु जानु भएको थेओ र अहेलरी सम्म नि घर नफर्किनु भएको लय उहा लाई कसैलरी देख्नु भएमा नजिकको प्रहरी लाई सम्पर्क गरिदेनु हुन अनुरोध गर्दछु । अथवा तला को फोन नम्बर मा सम्पर्क गर्नु सक्नु हुन्छ सम्पर्क फोन नम्बर :… Read more »
इटा भट्टामा आश्रित बालबालिकालाई न्यानो लुगा वितरण
Posted On January 17, 2018 Author siteadmin Category सामाजिक.
ललितपुर । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाट तालिम प्राप्त युवा समुहद्वारा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका १ मुलपानीमा रहेको इटा भट्टाका ३२ बालबालिकाहरुलाइ न्यानो लुगा वितरण गरेको छ । भुकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका स्थानीय सामाजिक परिचालक हरि महर्जनको संयोजकत्व र तालीम प्राप्त ३ युवाहरुको अगुवाइमा सहयोग संकलन गरि ३२ बालबालिकाहरुलाइ मोजा, सुरुवाल, ज्याकेट र टोपी वितरण गरेको हो । गोदावरी… Read more »
ढोलाहिटीमा मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणका लागि पोखरी बनाउदै
Posted On January 14, 2018 Author siteadmin Category सामाजिक.
ललितपुरको ढोलाहिटीमा मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणका लागि पोखरी बनाउदै कामदार । मेलाम्चीको पानी काठमाडौं विभिन्न ४ ठाँउमा पोखरी बनाएर वितरण गरिनेछ । प्रतिदिन १७ करोड लिटर क्षमता भएको मेलाम्चीखोलाको पानी काठमाडौं ल्याएपछि याङ्ग्री खोला र लार्के खोलाको प्रतिदिन ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउनेछ । यहि बैशाखसम्ममा मेलाम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर पहिलो चरणमा काठमाडौंको… Read more »
विद्यार्थीले महानगरपालिकालाई काठमाडौंको धुलो बुझाए
Posted On January 13, 2018 Author siteadmin Category सामाजिक.
काठमाडौं- धुलोको कारणले बाँच्नै सकस भएको भन्दै विद्यार्थी नेताहरुले काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय प्रवेशद्धारमा धर्ना दिँदै उपमेयरलाई धुलो बुझाएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा धुलोको कमी गर्न पहल गरियोस् भन्दै महानगरका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यको ध्यानाआर्कषण गराउन विद्यार्थीहरुले महानगरको गेटमा धर्ना दिएका हुन्। शाक्यलाई भेट्न नपाएपछि विद्यार्थी नेताहरुले प्रवेशद्धारमै प्ले कार्डसहित धर्ना दिएका थिए। ‘हामीले विभिन्न… Read more »
वन्दीगृह बन्यो पाठशाला, कारागारबाट घरमा खर्च पठाउनेहरु पनि छन्
भनिन्छ, जिउन जाने कारागार जीवनको पाठशाला हो, नजाने कारागार कालो छिंडी हो । हो, त्यही पाठशालाको अनुभव गरिरहेका छन्, झापा चन्द्रगढीको बन्दीगृहमा रहेका देउकुमार सार्की । जतिबेला उनी जेल परे, उनको हातमा कुनै सीप थिएन्। खेतीपाती, घाँस÷दाउरा, थलो–भकारो या त मजदुरी गर्ने सीपमात्र थियो । कारागार उनका लागि पाठशाला बनेको छ । त्यही पाठशालामा प्रयोगात्मक… Read more »
म बदलिन्छु, मेरो देश बदलिन्छ भन्ने नाराका साथ अभियान सुरू
Posted On January 12, 2018 Author siteadmin Category सामाजिक.
सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा कर्मचारी प्रशासनभित्रको विकृति हटाउने प्रयास गरेर चर्चामा आएका लालबाबु पण्डित बिहीबार सखारै हातमा झाडू लिएर तीनकुनेमा झुल्किए । एकछिनमा उनलाई साथ दिनेहरु थपिए । हातमा झाडू र फोहोर हाल्ने टोकरी बोकेको यो समूहले बिहानभर सडक सफा गर्दै हिँड्यो ।क्लिन काठमाडौं अभियान अन्तरगत कोटेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्मका सडक बिहीबार बिहान सफा गरिएको छ ।… Read more »
माघ २ देखि काठमाडौंका भित्री सडकमा चारपाङ्ग्रे सवारी निषेध
Posted On January 10, 2018 Author siteadmin Category सामाजिक.
काठमाडौं । अब काठमाडौं शहरका भित्री सडकमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन गुड्न नपाउने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका र महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महानगरका ७ वटा वडाका भित्री सडकमा माघ २ गतेदेखि चारपपाङ्ग्रे सवारी साधन प्रवेश निषेध गर्ने भएको हो । काठमाडौंको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरात्विक सम्पदाको संरक्षणका लागि विहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म भित्री… Read more »
काठमाडौँ – काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम शून्य डिग्रीमा झरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै आज यस वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ। उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । तराई क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सुले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। काठमाडौँको आजको न्यूनतम तापक्रम ० र बिहान ११ बजेको तापक्रम १४ डिग्री सेल्सियस रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसअघि पुस… Read more »